मरेर सहिद हुनेहरू जिएर त हेर जिउन झन् गाह्रो छ । – भूपी शेरचननेपाली समाजमा बाँच्न कति गाह्रो छ, आत्महत्या गर्ने र गर्न खोज्नेहरूलाई जति अरू कसलाई थाहा होला ? मानवको जस्तो सार्थक जीवन जिउन कति दु:ख, पीडा र अपमान झेल्नुपर्छ, पलपल मृत्यु बाँचिरहेका ‘अछूत’हरूले जति अरू कसले ब्यहोरेको होला ?
‘बीसौँ शताब्दीले कारलाई केन्द्रमा राख्यो । अब पैदलयात्रु पहिला भन्ने हो भने तपाईं बस्न योग्य ठाउँहरूलाई बल्ल आकर्षक, रुचिकर र शीलस्वभावयुक्त बनाउन सक्नुहुन्छ ।’ बेलायती अधिराजकुमार चार्ल्सको एउटा चल्तीको उद्धरण हो यो ।
बीसौं शताब्दीका चर्चित वैज्ञानिक दार्शनिक (फिलोसोफर अफ साइन्स) कार्ल पोप्परले सन् १९४५ मै कार्ल माक्र्सलाई झुठो भविष्य द्रष्टा (फल्ज प्रोफेट) को संज्ञा दिए । मुख्य कृति ‘ओपन सोसाइटिज एन्ड इट्स इनेमिज–२’ मा उनले आफ्नो मुख्य सिद्धान्त ‘क्रिटिकल र्‍यास्नालिजम’लाई स्थापित गर्ने क्रममा माक्र्सले मनोविज्ञानवादलाई गरेको आक्रमण र स्वायत्त सामाजिक विज्ञानका पक्षमा अघि सारेका तर्कको खण्डन गरे ।
यो कस्तो मुलुक होला जहाँ न्यायमूली आफैंले कहिले जन्ममिति ढाँटेको प्रश्न उठ्छ, कहिले शैक्षिक प्रमाणपत्र । आरोप र लाञ्छना छरपस्ट लाग्छन् । सडक होस् कि संसद् । विवादमा पर्छन् । आफ्नै बेहोराले फस्छन् । न्यायपालिकालाई नै ना इन्साफी गरिदिन्छन् ।
मिडियामा ओली सरकारप्रति संकेत गर्दै अधिनायकवादबारे चर्चा भइरहेको छ । यसै क्रममा सर्वसत्तावाद पनि चर्चामा आएको छ । यी दुवै पदावली झन्डै समानार्थी हुन् । अधिनायकवाद राजनीति विज्ञानको विशिष्ट पारिभाषिक पदावली हो । विभिन्न सन्दर्भमा विरोधी पक्षको आलोचना र विरोध गर्दा अधिनायकवाद पदावली प्रयोग गरिन्छ ।
संसारको सबभन्दा सुखी देश भनेर फिनल्यान्डलाई यस वर्ष राष्ट्रसंघीय दिगो विकास समाधान सञ्जालले घोषणा गर्‍यो । सबभन्दा स्थिर, सबभन्दा स्वतन्त्र र सबभन्दा सुरक्षित देश भनेर त विभिन्न संस्थाले उसलाई किटान गर्दै आएकै थिए ।
हामीलाई विकास चाहिएको छ । तर केको विकास र कस्तो विकास ? बहसले निकास पाउनुपहिल्यै विकास खोज्दा विनाश गरिसकेका हुन्छौं । जस्तो प्रकृतिका लागि हात्ती ठूलो हो भने विकासका लागि विमान । प्रकृति र विकास सहोदर दिदी र भाइ हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, सोच्नुपरेको छ । प्रस्तावित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा उदाहरण हो ।
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछिको प्रत्येक दशकमा नेपाली राजनीतिमा एउटा न एउटा पेचिलो राजनीतिक प्रश्न जहिले पनि उठिरहने गरेको छ । प्रजातन्त्र र राजतन्त्र सँगै कसरी जालान् भन्ने प्रश्न प्रजातन्त्र आएपछिको पहिलो दशकको महत्त्वपूर्ण प्रश्न थियो । त्यो प्रश्नले सामञ्जस्यपूर्ण उत्तर नपाउँदै राजा महेन्द्रले त्यसको एकलौटी हिसाबले जवाफ दिएर पञ्चायत ल्याइछाडे ।
के जनप्रतिनिधि, के कर्मचारी
हालैका केही घटनाले अशुभ संकेत गरेका छन् । आफूले भने अनुकूल प्रतिवेदन नदिएकामा पश्चिमतिरका एक स्थानीय तह प्रमुखले कर्मचारीलाई हातपात गरेछन् । लहान नगरपालिकाका एक वडा अध्यक्षले रीत नपुगेको जिन्सी सामानको भुक्तानी नपाएको झोँकमा कर्मचारीमाथि सांघातिक आक्रमण गरेको समाचार आयो ।
पहाड होस् कि तराई । खेतबारी खोस्रिने हात खोई ? जता जाऊँ जग्गा बाँझै छन् । विभिन्न प्रक्षेपणअनुसार देशभरि आज करिब एक चौथाइ जग्गा असरल्ल छन् ।